Plex.Earth na-ebudata ihe oyiyi sitere na Google Earth Ọ bụ iwu na-akwadoghị? - Geofumadas
Jenụwarị, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Anyị ahụwo tupu ụfọdụ mmemme ebudatara ihe oyiyi na Google Earth. Ebugharị ma ọ bụ na ọ bụghị, ụfọdụ adịkwaghị StitchMaps y GoogleMaps Downloader.
Ụbọchị ọzọ enyi gị jụrụ m ma ihe Plex.Earth sitere na AutoCAD megidere iwu Google ma ọ bụ.
Kedu usoro okwu Google
(c) nhazi, nchịkwa nke ụgbọ mmiri ma ọ bụ ngwa ndị yiri ya. Enweghị ike iji ya Software n'enweghị ụzọ nke na-enye onye ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ ohere ịnweta nbudata nnukwu ma ọ bụ ntanetị nnukwu ntanetị nke nkwụsị na ogologo oge nhazi. Onye ọrụ agaghị eji Software maka akwụkwọ ma ọ bụ nbudata ngwa ngwa nke ihe oyiyi, data ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ.
N'ihe gbasara Google Maps, ọ na-ekwu, sị:
«Maynwela ike wepụta ọdịnaya maka ojiji nke na-enweghị ihe metụtara ngwaahịa ndị ahụ, dị ka maka iji dezigharị ọzọ n'ime mbipụta ọzọ, mbipụta desktọọpụ, ma ọ bụ Ngwa GIS. "
Emeela ndụmọdụ ahụ na forums dị iche iche, ma ESRI na Google Earth, mana isi iyi kachasị mma na nke anyị, ebe PlexScape bụ onye nrụpụta nyere ikike site na AutoDesk, bụ ihe ekwuru na otu saịtị ahụ, naanị mgbe njikọ ahụ dị na laabu. Ọ bụ ezie na blog abụghị echiche gọọmentị nke AutoDesk, ọ na-ahapụ ndị ọrụ na-ejigide mgbagwoju anya nke nkwupụta ndị a kpọtụrụ aha naanị.
Soctt Shpeppard wetara azụ ma kwuru na iwu akụkụ ga-akọwa, nke e zoro aka na ụlọ ọrụ nwere nkwekọrịta na Google mejuputa mmepe na API nke Google Earth na-agụnye ihe Civil3D na AutoCAD Map na-eme ka importing dijitalụ nlereanya na ihe oyiyi
Autodesk nwere ikikere site n'aka Google nke na-enye ohere Autodesk iji mejuputa Google Earth API na ngwaahịa Autodesk; Otú ọ dị, ihe akọwapụtara nke mmejuputa anyị yana usoro nke ikikere Autodesk maka iji teknụzụ ndị ọzọ nwere nzuzo, anyị enweghịkwa ohere ịkọrọ ndị ahịa ozi ahụ.
Ndị ọrụ njedebe na-achọ iji Google Earth imagery n'èzí Autodesk ngwaahịa (gụnyere ịdọta ya na ngwa nke aka ha) ghaghị ịnweta ikikere nke aka ha n'aka Google ma rube isi na usoro Google maka ojiji.
O dokwara anya na ihe ndị ọrụ njedebe chọrọ ime na ngwaahịa ndị e mepụtara n'ebe ahụ, bụrịrị ibu ọrụ nke ha ma chọọ ikikere ozugbo na Google iji kwado okwu ndị ahụ.
Yabụ, dị ka Plex.Scape bụ mmepe na ike nke AutoCAD, ọ kpuchiri ya n'okpuru nkwekọrịta a. N'ezie, uru Plex.Earth bụ na Civil3D anaghị eji ya maka nke ahụ, mana naanị AutoCAD nke nwere ike ịbụ LT. Ọzọkwa oyiyi na-abịa na agba na e nwere otu nhọrọ ịhọrọ mkpebi maka download.
Dịka m kwuru na isiokwu m gara aga, nke a ga-abụ otu n'ime ngwaọrụ ndị bara uru maka ndị na-eji nkà mmụta okpukpe Hispanic eme ihe. Enwere ike ịzụta Plex.Earth ozugbo na saịtị ahụ PlexScape ma ọ bụ jiri onye na-ere ahịa AutoDesk. N'ihe banyere Latin America, ha na-achọ ndị nkesa mpaghara.
Previous Post«Previous Ngwadogwu software, isiokwu na-adịghị agwụ agwụ
Next Post Map ndị dị gburugburu si ụwaNext »
4 Na-aza "Plex.Earth na-ebudata ihe oyiyi si Google Earth. Ọ bụ iwu na-akwadoghị?"
Fede kwuru, sị:
Ha nwalere SAS.Planet?
Ee, ọ bụ ihe iwu kwadoro. Ọ dị mma, a na-eme ya n'okpuru nkwekọrịta AutoDesk nwere na Google.
ped kwuru, sị:
Ọ BỤ Ọ BỤ Iwu ma ọ bụ BỤGHỊ?